प्रधानमन्त्री ओलीले पदको मोह नराखी राजीनामा दिनु उत्तम ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रधानमन्त्री ओलीले पदको मोह नराखी राजीनामा दिनु उत्तम ?
नारायण गाउँले, बेलायत
प्रकाशित मिति १३ चैत्र २०७६, बिहीबार १५:३२ लेखक नेपाली जनता
सच्चा राष्ट्रियता भनेको यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पदको मोह नराखी राजीनामा दिनु र अर्को व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो ।
व्यक्तिगत स्वास्थ्यभन्दा राष्ट्रको स्वास्थ्य माथि राख्न सक्नु नै राष्ट्रियता हो । नेकपाभित्र अनुभव या नेतृत्वको सङ्कट पनि छैन । तीन-तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री नै सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ । विज्ञ, शिक्षित र दीक्षित जस्तो जनशक्ति चाहिए पनि पार्टीभित्रै उपलब्ध छ ।
यो लड़ाइँ अब एउटा भाइरससँगको मात्रै होइन । विज्ञप्ति निकालेर आज यति जना सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन । यो त दुई चार हप्तामा सकिएला पनि । तर यो ग्लोबल क्राइसिसले अन्तजस्तै हामीकहाँ पनि अभूतपूर्व आर्थिक र सामाजिक सङ्कट निम्त्याउने पक्का छ । यसका लागि एकीकृत रूपमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता हुन्छ । देश केही हप्ता ठप्प हुने लक्षण देखियो । दैनिक ज्यालादारीमा जीवन धान्नेलाई के गर्ने ? बाटोमा पोलेको मकै र चटपटे बेचेर गुजारा गर्नेलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? दैनिक गिटी कुटेर छोराछोरीको मुखमा माड़ लगाउने आमालाई के गर्ने ? खलासीलाई के गर्ने ? कपाल काटेर जीविका चलाउनेलाई के गर्ने ? सानो बिजनेश चलाएर छोराछोरी पढाउनेलाई के गर्ने ? सबै राष्ट्रिय महत्त्वका योजना थला पर्ने देखियो, तिनलाई कसरी जीवन दिने ? थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्ऱ्याकमा ल्याउने ? बढ्दो मुद्रास्फीति रोक्न के गर्ने ? यो सङ्कटको अन्त्यमा विश्वभर उत्पादनभन्दा माग बढ़ी हुँदा हुने मूल्यवृद्धिले निम्त्याउन सक्ने भयङ्कर व्यापारघाटा रोक्न के गर्ने ? वैदेशिक मुद्राको मुख्य आय रेमिट्यान्स नसोचेको गतिमा घट्ने निश्चित छ, त्यो ग्याप भर्न के गर्ने ? यो सङ्कट भारतमा गहिरो हुँदै गयो भने यहाँ खाद्य सामग्रीको चरम अभाव हुन सक्छ, त्यतातिर कसले कदम उठाउने ?
निमोनिया त परको कुरो भयो, सामान्य जरो र खोकी आयो भने पनि मान्छे उपचार नपाएर मर्ने देखियो । न देशका अस्पतालमा ओपीडी खुला छन् न तिनले कोभिड़का शङ्कास्पद बिरामीलाई भर्ना लिन्छन् । यो त सरकारीदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाको चरम अराजकता भयो । छतमा हेलिप्याड बनाउन सक्ने र अरू बेला एम्बुलेन्सलाई विरामी आफ्नोमा ल्याइदिनकै लागि आकर्षक रकम घूस खुवाउन सक्ने हस्पिटलहरूले यो राष्ट्रिय सङ्कटमा दुई चार हजार पीपीईको व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । किड्नीको सिकिस्त बिरामीलाई समेत रूघा लागेको भरमा सामान्य मेडिकल सुविधा समेत नभएको चितवनको कोरोना हस्पिटल रिफर गरिएको र त्यहाँ तिनको मृत्यु भएको घटना हाम्रो समग्र सिस्टमप्रति ठूलो झापड़ हो ।
अहिले नै हामीले भारत र चीनसँग मास्क र पीपीईलगायतका सामान ‘अनुदान’ मागेका छौं । किन्छु भन्दा समेत सजिलै उपलब्ध नभएका सामान सुरुमैं अनुदानमा माग्नुले देशको इज्जत बढ्दैन । कम्तिमा हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्म त किन्नु या उत्पादन गर्नुपर्ने हो । त्यतातिर कसले सोच्ने ? एउटा महावीर पुन भन्ने हिम्मतिलो नागरिक एक्लै पीपीई उत्पादन गर्न कस्सिएको छ, सरकारले चाह्यो भने धेरै थोक नमागी कनै पनि चलाउन सकिँदो हो । त्यसमा पनि विगत एक महिना सक्रिय प्रधानमन्त्री भएको भए यतिबेला यी सबै पूर्वाधार जोड़िसकिएको हुँदो हो ।
अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र नागरिकलाई दुई महिना बिजुलीमा निःशुल्क दिन सकिन्छ कि ? दुई महिनाको स्वास्थ्य वीमा-प्रिमियम सरकारले बेहोर्न सक्छ कि ? बिनाधितो एकदेखि बीस लाखसम्मको ऋण दिन सकिन्छ कि ? नेशनल फुडब्याङ्क र हरेक वडामा शाखा खोलेर निःशुल्क या सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि ? नयाँ उद्योगलाई केही वर्ष ऊर्जा र कर छुट दिएर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ कि ? घोषणा त धेरैले धेरै पटक गरेकै छन् तर काम नै गर्न सकिने गरी यी सबैका लागि स्रोत र साधन जुटाउन सकिन्छ कि ?
आयात निर्यात ठप्प छ, राजश्व कम हुने नै भयो । सबै देश आफै सङ्कटमा छन्, अनुदान माग्ने कुरो पनि भएन । यस्तो बेला गरिने हरेक घोषणाका पछाडि ठोस आर्थिक स्रोतको पहिचान पनि आवश्यक छ ।
यस्तो बेला आर्थिक नीति तय गर्न राष्ट्रब्याङ्कको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ तर त्यो आफै गभर्नरविहीन छ । चीनसँग अनुभव र सहयोग माग्न सकिन्छ तर यस्तो बेलामा समेत त्यहाँ हाम्रो राजदूत छैनन् । स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म छुट्टाछुट्टै कोष खड़ा गर्न लागेका छन् तर न तिनसँग प्रयोगशाला छ, न केन्द्रसँग समन्वय छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता त म्याद गुज्रेको पार्टीभित्र कसरी सङ्गठन कब्जा गर्ने भन्ने घटिया रणनीतिमा व्यस्त छन् । अलि बढ़ी मौका मिले एकदुई वटा राजनैतिक भागबण्डामा तिनको नजर छ । सबै भताभुङ्ग जस्तो अवस्था छ । यो त सानो र रफ लिस्टमात्रै भयो । सूक्ष्म तहमा हरेक घण्टा सक्रिय र सचेत भएर गर्न पर्ने हजारौं काम हुन्छन् । र यी सबै काम एउटा ऊर्जाशील प्रधानमन्त्रीकै भिजन, सक्रियता र नेतृत्वमा सम्पन्न हुने हो । मन्त्रिमण्डल भनेको प्रधानमन्त्रीको उपकरण मात्रै हो ।
विश्व इतिहास र हाम्रो पुस्ताकै ठूलोमध्ये एक यो युद्धमा देशले सेनापतिबिनै लड्न पर्नु एउटा राष्ट्रवादी नागरिकलाई पक्कै बिझाउनुपर्ने विषय हो । विज्ञान र चिकित्सा शास्त्रले पनि ओलीजीलाई ६ महिना सक्रिय जीवनमा फर्किन सक्ने देख्दैन । आफ्नो दाँत आफै माझ्न सक्ने या आफ्नो दाह्री आफै काट्न सक्नेसम्मको सक्रियताले यो लड़ाइँ जित्न सकिन्न । आम जनतामा पुनः सरकार र राज्यप्रति विश्वास जगाउन प्रधानमन्त्रीमा यसअघि नदेखिएको ऊर्जा र सक्रियता चाहिन्छ । सिङ्गो देशलाई एक बनाएर अगाडि लैजाने नेतृत्व चाहिन्छ । लागोस्, देशमा सबैभन्दा जिउँदो मान्छे प्रधानमन्त्री नै छ र उसलाई देखेरे हामीभित्र मर्नै लागेको जीवन पनि मुस्कुराउँछ ।
शायद यति धेरै ऊर्जा भएको व्यक्ति नेपालको भाग्यमा अहिल्यै नहोला, तर अहिले त ‘भ्याकुम’ नै भयो । कम्तिमा भ्याकुम चिर्नसक्ने व्यक्ति नेकपाभित्र पक्कै छन् ! यो सङ्कटको समाधान या ओलीजीको स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार जुन पहिले हुन्छ, त्यही मितिमा उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री पद फिर्ता दिने गरी अहिले उहाँको राजीनामा नै एउटा सच्चा राष्ट्रभक्तिको नमुना हुनुपर्ने हो । ओलीजीको शक्ति र आदर्श पनि त राष्ट्रवाद नै हो !
संयुक्त राष्ट्रले जारी गऱ्यो ‘दीपावली’ विषयक हुलाक टिकट श्रृंखलामा नेपालको नाम खै ?
न्यूयोर्क। संयुक्त राष्ट्र हुलाक विभागले नेपाल र भारतमा मनाइने प्रकाशको पर्व तिहारको उपलक्षमा ‘दियो’ भएको टिकट जारी गरेकोमा भारतले…
मोरङ ।भारतले विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस १६ साउनदेखि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । फिल्ड अफिस हटाउन तयार रहेको औपचारिक घोषणा…
यीनै हुन प्रचण्डका घरवेटी मुलुक मारा ठेकेदार, के गृहमन्त्रीले कारवाहि गर्लान ?
काठमाडौं । शैलुङ कन्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारीले हात हालेका अधिकांश आयोजनाहरुको हालत दयालाग्दो अवस्थामा छन । उनले जिम्मा लिएका…
शुष्मा स्वराज मोदीको विशेष दूत बनेर बिहिबार नेपाल आउँदै
वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको बेला सम्बन्ध सुधारको प्रयासस्वरुप भारतीय बिदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज नेपाल आउने भएकी छन्…
लाइसेन्स परीक्षा फेल भएका नै बिरामी जाँच्छन्, लाइसेन्स नलिई ‘प्राक्टिस गर्ने’ स्वदेशी डाक्टरहरूको संख्या बढी !
काठमाडौं । मुलुकमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स लिनैपर्ने नियम…
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ५० दिनमा पनि पुरिएनन् खाल्डाखुल्डी
काठमाडौं । प्रधानमन्मत्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएको ५० दिन बित्दा पनि चाबहिल-जोरपाटी सडकखण्डका…
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 26 views
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 21 views
अब एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा 16 views
वाण्ज्यि विभागमा दर्ता नै नभएको कम्पनीबाट कोरोना ‘र्‍यापिड टेस्टिङ किट’ टेण्डरको खुलासा 13 views